Fooyinsaa fi Gurmeessuu
Qaaqa Foo'insaa fi Gormeessuu kanIjaartuu Gabaasaakeessatti, dirreewwan gabaasa kee keessatti secca'amuu qaban agarsiisa, fi dirreewwan gurmee uuman bakka tokkotti qabamu. Gabaasa kee dirree wayiin yoo gurmeessite, gabaasni hundi gatii walfakkaatu qaban gurmee tokko keessatti kaa'amuu qabu.
Saanduuqni Gurmuu tartiiba dirree gubbaadhaa gara jalaatti agarsiisa. dirree barbaadde filachuu dandeessa, san booda qabduu OL Siqsi ykn Gadi Siqsi cuqaasuun dirree tarree keessaa ol ykn gadi siqsuu dandeessa.
Foo'insii fi gurmeessuun tartiba tarree gubbaa gara gadiitti raawwata.
Dirree filaman irraa, gurmuu haaraan gatii jijjiiraman hundi galmee tokkoo durtiin ni uumamu. Amala kana gosa dirree irratti hundaa'uun jijjiiruu ni dandeessa.
Dirree gosa Barruuf, Arfiilee Huddeelsoo filattee saanduqa barruu isaanii gadii keessatti arfiilee lakkoofsan n ta'an galchuu dandeessa. Galmeewwan arfiilee n isaan tokkooffaa walfakkaatan iddoo tokkotti gurmaa'u.
Gosa dirree Guyyaa/Yeroo dhaaf, galmeewwan waggaa, kurmaana, ji'a, guyyaa, sa'aatii, ykn daqiiqaa gurmeessuu dandeessa. Dabalataan giddu'uu torbaniif fi sa'aatiif ifteessuu dandeessa: torban 2 deetaa gurmuu kudharfanee keessatti, sa'aatii 12 deetaa gurmuu walakkaa guyyaatti gurmeessa.
Gosa dirree LakkoofsaOfmaan, Maallaqa, ykn Lakkoofsa, dhaaf giddu'u ifteessuufi ni dandeessa.
Yemmuu galmeewwan tokko tokko fuula walfakkaatu keessa olkaa'uuf ifteessitu filannoowwan sadi qabda:
Handaarraalee fuulli hin jiru itti hin dhiphatamu.
Gurmuun hundi, gurmuu irraantoo, kutaa gadifageenya, fi gurmuu jalaantoo fuula walfakkatu irratti maxxansa.
Gadi fageenya jalqabaatiin, yoo galmeen gadi fageenya jalqabaa fuula walfakkaatu irratti maxxansama ta'e, fuularratti qofa gurmuu irraantoo maxxansa.
Title is: Fooyinsaa fi Gurmeessuu